သိုးကလေ He was not with her. He wasaserviceman away onajourney.
ဉာဏ်စဉ် ၁၆ ပါး (၂) ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် (ဖြစ်ပျက်) ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကိုအဖန်တလဲလဲရှုသောဉာဏ်။ Udayabbaya Nana (Knowledge of arising and passing away)
Breaking Benjamin ၂၀၁၀မတ်လတွင် Hollywood Record များမှ album များ၏ အကောင်းဆုံးသီချင်းများ ပေါင်းစပ်ထုတ်ဝေရန် တီးဝိုင်းကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Blow Me Away ကို ပုံစံသစ်ဖြင့် ထုတ်ဝေရန်ရှာခဲ့
Breaking Benjamin "We Are Not Alone" ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခဲ့ပြီး IGN မှ Colin Moriorty ချီးကျူးခဲ့ပြီး အလွန်အမင်းကျေနပ်ခဲ့ပြီး ထိုနှစ်အတွင်း အကြိုက်အနှစ်ဆုံး album တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ စာရေးဆရာ Amber Authier က "ကျွန်တော် Breaking Benjamin ကို တစ်ပတ်ကျော်နားထောင်ပြီးနောက် ကျွန်တော် အပေါ်စိုးမိုးလာပါသည်"ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Breaking Benjamin ဖန်တီးထားသည့် အရည်အသွေးမှာ ရိုးရှင်းသော ပုံစံတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် Blow Me Away သီချင်းထွက်လာခဲ့ပြီး စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ၂၄ တွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ၂၃တွင် So Cold EP ကို ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး Blow Me Away နှင့် Lady Bug တို့ပါဝင်ပြီး အကူးစတစ်ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။
နွဲ့ယဉ်ဝင်း မိဘတွေက ငယ်သူဘဝမှာပဲ အိမ် ထောင်ကျကြတာ။ အမေက ၁၆ နှစ်။ အဖေက ၁၉ နှစ်မှာပဲ Run Awayပေါ့နော်။ လိုက်ပြေးကြတာ။ စစ်ပြီးတဲ့အခါကျ တော့ ကျောင်းတွေဘာတွေကလည်း မဖွင့် သေးဘူး။ ဆယ်တန်းတောင်မှ မအောင် သေးဘူး ထင်ပါတယ်။ နောက်တော့ အဖေ က အဲဒီခေတ်မှာ ပညာဝန်ထောက်ခေါ် မလား၊ မင်းကြီးခေါ်မလား ဖြစ်လာတယ် ပေါ့လေ။
သေဆုံးခြင်း လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားသည်ကို died ဟူသော စကားလုံးအစား ပိုမိုယဉ်ကျေးသော passed away, passed on, or expired စာလုံးများဖြင့် ပြောဆိုကြသည်။ သေဆုံးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုacorpse, cadaver,abody,aset of remains,askeleton(အရိုးစု) စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်။ ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် လူသေကို deceased ဟုခေါ်ဆိုသည်။
Post-punk အဖြစ်အပျက်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ Cold Cave, She Wants Revenge, Eagalls, the Soft Moon, She Past Awayနှင့် Light Asylumတို့ပါဝင်ပြီး darkwave ပုံစံကိုယူသုံးခဲ့သည်။ A Place to Bury Strangers သည် အစောပို်င်း post-punk နှင့် shoegaze ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ post-punk ဝါသနာရှင် goth ယဉ်ကျေးမှုထဲသို့ ရွေ့လျားလာခဲ့သည်။ Savages သည် အစောပို်င်း ဗြိတိန် post-punk တီးဝိုင်းများကို အမှတ်ရစေခဲ့သည်။